Umaki: izibalo ze-youtube | Martech Zone
Umaki: izibalo ze-youtube
Uma ungakangeni ngemvume okwamanje, i-Youtube ibuyekeze iphakheji yayo ye-Insights ibe yiphakethe elisha, eligcwele lama-analytics. Nazi ezinye zezici zakamuva ku-Youtube Analytics: Ikhasi elihle lokubuka konke. Ukubika okujulile okubandakanya izibalo zokuzibandakanya njengoba kukalwa ngokuthandwa, ukungathandwa, ukuphawula nezintandokazi ezingeziwe noma ezisusiwe. Amavidiyo aphezulu aqhuba ukubukwa nokubhaliselwe okuningi. Umbiko omusha wokugcinwa kwezithameli okhombisa ukuthi izibukeli zakho zikude kangakanani namavidiyo
Abantu abaningi abakuqapheli, kepha i-Youtube inezibalo ezithile eziyisisekelo ongazilandela ngamavidiyo akho. Uma ungathanda ukwazi ukubona ukuthi obani abashumekayo nokuthi badlale imidlalo emingaki, kulula ukusebenzisa ithuluzi le-Insight le-Youtube. Okokuqala, ngena ngemvume ku-akhawunti yakho ye-Youtube bese ukhetha eyodwa yamavidiyo wakho. Uzobona inkinobho ye-Insight kubha eseceleni yangakwesokudla: Okulandelayo, khetha Ukutholwa bese uzothola imenyu yezinketho: Khetha okushumekiwe